ANKATOKY NY FIFIDIANANA :: Efa voazara ny 80%-n’ny karatry ny mpifidy eny amin’ny fokontany • AoRaha
ANKATOKY NY FIFIDIANANA Efa voazara ny 80%-n’ny karatry ny mpifidy eny amin’ny fokontany
Herinandro mahery sisa. Fomba fiasa roa no entin’ireo fokontany sasantsasany eto an-drenivohitra nizarana ny kara-pifidianana dia ny fametahana peta-drindrina mampandre ny mponina fa efa azo raisina ao amin’ny fokontany izany. Ny fitetezana ny tokantrano kosa no ataon’izy ireo amin’izao fotoana izao.
Ho fitsinjovana ireo olona tsy mahatratra ny oran’ny fokontany no antony nanaovana izany. “Efa ny 80%-n’ny kara-pifidianana no efa voazaranay hatramin’izao. Misy ihany ny olana kely satria misy ireo tsy voasoratra ao anaty lisim-pifidianana. Tsy nisy ny fandraisana andraikitr’ireo mponina tamin’ny fanamarinana ny anarany tao anaty lisitra nefa efa nihemotra iray volana izany”, hoy Randrianarivony Victor Patrick, lehiben’ny fokontany Ankorondrano Atsinanana.
Raha tokony ho nifarana ny 15 avrily ny fanakatonana ny lisi-pifidianana dia ny 15 mey lasa teo indray izany vao nifarana. “Nieritreritra ny olona fa efa tao ny anarany dia tsy niverina nanamarina ny anarana intsony izy. Eo ihany koa ireo nifindra monina any amin’ny fokontany hafa saingy haverina any amin’ny rantsamangaikan’ny Ceni eny anivon’ny distrika na CED izany”, raha ny fanamafisany hatrany.
Efa samy mamarana ny fizarana ny kara-pifidianana amin’izao fotoana izao ny ankamaroan’ny fokontany. “Efa fomba fiasanay hatramin’izay ny mizara ny karatra isan-tokantrano rehefa fotoam-pifidianana toy izao. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny fitarainana hoe amin’ny tsy fahazoana izany. Raha ohatra ka tsy nahazo ny karatra izy tamin’ity nefa misoratra ao anaty lisi-pifidianana ny anarany dia ny karatra taloha no asaina hoentina ety amin’ny fokontany dia izahay indray no mitondra izany eny amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na Ceni”, raha ny fanazavan’ny lehiben’ny fokontanin’ Ankorondrano Andranomahery, Ramanantany Alain.
Raha ny fampahafantarana avy amin’ireo fokontany nanaovana fanadihadihana dia nitombo ny isan’ny mpifidy tamin’ity taona ity. “Raha ny teto aminay manokana dia nitombo ny isan’ny mpifidy. Raha biraom-pifidianana roa hatramin’izay dia lasa efatra amin’izao fotoana izao. Voafetra ho fitonjato ihany farafahabetsany ny isan’ny mpifidy anaty biraom-pifidianana iray”, raha ny fanamarihan’ny lehiben’ny fokontany Ankrondrano Atsinanana. Ny harivan’ny 16 oktobra lasa teo no tonga ny kara-pifidianana ho an’ity fokontany ity ka ny ampitson’iny ihany dia efa niroso tamin’ny fizarana izany izy ireo. Miasa 24 ora amin’ny 24 ora kosa ny fokontany mandra-pahavitan’ny fifidianana.
Tetikasam-panjakana Mandroso ny asa fanamboaran- dalana By Pass -Andranobevava
Ora iray ho an’ny tany Entanina tsy hampiasa herinaratra ny malagasy
FAMAHANA OLANA :: Nomena sehatra hamoaka ny hetahetany ireo olona jamba
FAHASALAMAN’NY LOHA :: Mitarika fahatapahan’ny lalan-dra amin’ny atidoha ny tsy fitandremana